Puntland oo canbaaraysay weerarka Westgate xili madaxweyne Faroole tacsi u diray Uhurru (Dhegeysi) – Radio Daljir
Seteembar 23, 2013 5:15 b 0
Garoowe, September 23, 2013 – Dowladda Puntland ayaa canbaaraysay weerarkii kooxaha lagu sheegay Argagixisada ay ku qaadeen suuqa Westgate ee magaalada Nairobi, halkaas oo khasaare badan uu ka soo gaaray dad kala duwan oo suuqa joogay, xili weli howl-gal culus uu socdo.
Shir jaraa?id oo maanta uu Garoowe ku qabtay wasiir ku xigeenka wasaarada warfaafinta ee Puntland Cabdulaahi Faarax Axmed (Aswad) ayuu ku sheegay in ay Puntland ka xuntahay wixii dhacay, waxaa kaloo uu sheegay in ay tacsi u dirayaan qowsaskii dadku kaga dhinteen weerarka.
Mudane Aswad waxaa uu kooxda ku tilmaamay kuwa naxariis laawayaal ah oo Argagixiso ah, isla markaasna doonaya in ay khal-khal geliyaan amniga guud ee gobolka Barriga Afrika, waxaa uu sheegay in shacabka Puntland ay dareenka murugta la qabaan kuwa Kenya.
Docda kale madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Faroole ayaa warqad tacsi ah u diray hugaamiyaha Kenya Uhurru Kenyatta, isagoo si cad u sheegay in weerarka khasaaraha ka dhashay ay ka xun yihiin isla markaasna ay la qaybsanayaan dareenka dadka reer Kenya iyo dowladda.
War-saxaafaded ka soo baxay Puntland ayaa lagu yiri ???Madaxweynaha Puntland waxa uu warqad tacsi ah u direy Uhurru Kenyatta, isagoona la wadaagay dareenka shacabka Kenya ,mawqifka la-dagaalnka argagixisada iyo weliba dadaalka Kenya ugu jirto xasilinta Soomaaliya.?
DHEGEYSO:- Wasiir ku xigeenka warfaafinta Cabdulaahi Faarax Axmed Aswad oo shir jaraa?id qabtay